Ukuphupha ngamanzi aManzi Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Amanzi luphawu lwamaphupha abonakala rhoqo kutoliko lwamaphupha. Zininzi iimeko zamaphupha ezinokutolikwa ngokwahlukileyo. Kodwa kunokuthetha ukuthini xa ubona uhlobo oluthile lwamanzi, oko kukuthi amanzi e-ice, ephupheni? Nangona kunjalo, njengalo naluphi na uhlalutyo lwamaphupha, ayisiyiyo kuphela isimboli ngokwayo ekufuneka ithathelwe ingqalelo. Endaweni yoko, umxholo wephupha kufuneka uthathelwe ingqalelo kutoliko olunenkcukacha. Ke ngoko, jonga kwakhona iphupha lakho kwaye uzame ukukhumbula iinkcukacha ezininzi kangangoko kunokwenzeka.
1 Uphawu lwephupha «amanzi e-ice» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «amanzi e-ice» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «amanzi e-ice» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «amanzi e-ice» - ukutolikwa ngokubanzi
Ngokubanzi, umfanekiso ophuphayo wamanqaku e-ice enomkhenkce ikakhulu kwi iingcinga ezingekho zingqondweni, Iimvakalelo kunye nemikhwa yokuphupha. Nangona kunjalo, ezi azikho zibi, ngokuchaseneyo, zilungile ngokupheleleyo. Ngale ndlela, umphuphi uyazibona izinto ezintle ebengazazi ngaphambili el mundo yomlindelo okanye engakhange ihlale nayo. Ngoku kuya kufuneka uyitshintshe le ndlela yokuziphatha kwaye ujonge ngakumbi le micimbi kwixa elizayo.
Nabani na osela amanzi omkhenkce ephupheni lakhe uyazazi iimfuno zakhe kunye neemfuno zakhe ngokuchazwa ngokubanzi kwephupha kwaye unika ingqalelo kwimpilo yakhe. Ukuvela kwamanzi omkhenkce njengophawu lokulala kunokusetyenziswa njengophawu lokuzalwa ngokutsha okanye hlaziywa Makuqwalaselwe. Oleleyo ufuna ukwenza utshintsho ebomini bakhe kwaye afikelele kwinto entsha.
Ngamanye amaxesha, uphawu lwephupha "amanzi e-ice" linokubonisa imeko yobomi enzima, ethi wena ngokwakho ubangelwe yimvakalelo yakho yokubanda. Kungenxa yoko le nto umntu kufuneka aqwalasele ngakumbi ilizwe lakhe leemvakalelo ebomini bokuvuka. Kuba kungoko kuphela apho iingxaki zobomi bokwenyani ziya kusonjululwa.
Uphawu lwephupha «amanzi e-ice» - ukutolikwa kwengqondo
Ngokutsho kohlalutyo lwengqondo lwephupha, umntu oleleyo ufumana eyakhe imbonakaliso ngesimboli sephupha "amanzi e-ice." Ubomi bomphefumlo kunye nayo yonke imixholo eyaziwayo nengaziwayo. Kuya kufuneka uthathe kwaye unakekele oku ngokusondeleyo kwihlabathi lokwenza iwotshi. Kungenxa yokuba ngeli xesha oku kubonakaliswa kakhulu yimvakalelo ethile yokubanda. Oku kunokukhokelela kwisizungu okanye kunqongophele kobomi bentlalo kwihlabathi lokwenyani.
Amanzi omkhenkce njengephupha nawo angabikho zingqondweni amandla engqondo ifanekisela into iibhloko zephupha kwihlabathi elivukayo ngokuziphatha kwayo. Ke ngoko uyacetyiswa ukuba utshintshe indlela oziphethe ngayo kwaye ke uvumele amandla okuhamba. Izigqibo malunga notshintsho olunokwenzeka kwindlela yokuziphatha zinokutsalwa kwiimeko ezijikeleze uphawu lwephupha.
Uphawu lwephupha «amanzi e-ice» - ukutolika kokomoya
Ukutolikwa kwephupha lokomoya kutolika uphawu lwephupha "amanzi e-ice" njengesicelo kumphuphi ukuba avuselele inxenye yakhe ebambekileyo. Kuphela emva koko iba yinto enye ukuzalwa kwakhona ngokomoya kunokwenzeka.